Redmi dia efa manomboka miasa amin'ny telefaona 5G voalohany | Androidsis
Redmi dia efa miasa amin'ny findainy voalohany miaraka amin'ny 5G
Hatramin'ity lohataona ity dia afaka isika mividiana telefaona 5G voalohany eny an-tsena izao. Raha ny any Espana efa manana safidy maodely tsara azo alaina izahay. Ankoatr'izay, marika Android maro no efa miasa amin'ny telefaona vaovao mifanaraka amin'ny 5G. Ny farany izay hohamafisina dia i Redmi. Manambara izany ao amin'ny media sosialy ny tale jeneraliny.
anefa Redmi dia nanomboka ny fizotry ny famoronana inona no findainy voalohany misy 5G. Saingy ny marika sinoa dia miatrika olana lehibe amin'ity tranga ity, rehefa mamorona ilay fitaovana. Noho izany, manontany ny mpampiasa azy ireo amin'ny tambajotra sosialy any Sina izy ireo hoe inona no tian'izy ireo.
toy ny ity karazan-telefaona ity dia mavesatra noho ny maodely mahazatra, satria mila na mampiasa bateria lehibe kokoa izy ireo. Noho izany, avy amin'ny Redmi dia manontany an'ireo mpampiasa izay tiany izy ireo. Raha mila telefaona misy bateria bebe kokoa ianao, fa mavesatra kokoa, na raha maodely maivana kokoa ianao raha tsy manana fizakantena. Olana atrehin'izy ireo izao.
Amin'izao fotoana izao toa efa tany am-piandohana ity fitaovana ity, raha toa izao ka zavatra mampiahiahy ny marika. Fa farafaharatsiny azontsika jerena fa izy ireo koa dia efa manana drafitra hampiditra ny 5G amin'ny telefaonin'izy ireo ato ho ato.
Tena mety ho tsy ho amin'ny taona 2020 vao tonga izao finday Redmi izao mankany amin'ny fivarotana. Raha mbola eo am-pamokarana vao manomboka ianao, na mamolavola telefaona telefaona fotsiny dia mbola mila volana maromaro vao vonona izany. Ka toa hita fa daty nilamina i 2020.
Na izany na tsy izany, manatevin-daharana lisitra marika marobe amin'ny Android izy ireo, izay hamela antsika amin'ny 2020 miaraka amin'ireo findainy 5G voalohany. Azo inoana, mandritra ny volana vitsivitsy andao handeha hahafantatra bebe kokoa momba ity fitaovana ity noho i Redmi handeha hanomboka amin'ny fivarotana. Hihaino tsara isika araka ny fantatra bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Redmi dia efa miasa amin'ny findainy voalohany miaraka amin'ny 5G
Batterie 5000 mAh lehibe no hananan'ny Realme 5